အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ဘန်ကောက် ချမ်းချမ်း နန်းကြီးသုပ်
thapye February 24, 2012 at 1:34 PM
တီချမ်း February 24, 2012 at 5:40 PM
OMG do we do that in my blog????
i think it is only for famous blogger like KOM LOL
next time when you come to my blog BYOD so that we can haveafun fun fun
Pork Nangyi ............
I think you are the fist pioneer.
she is WELL KNOWN for that haha
အံမယ်မင်း အောက်ဆုံးပုံက ကဗျာအဆန်ဆုံးပါလားဟရို.။
တီချမ်း February 25, 2012 at 9:40 AM
ဟုတ်ပါ့ အနောရေ တီတောင် တင်ပြီးတော့ ရုတ်တရက်ကြည့်တော့ တမျိုးကြီး
Anonymous February 24, 2012 at 10:30 PM
တီချမ်း February 25, 2012 at 9:41 AM
နန်းကြီးသုပ်က ဝက်သားနဲ့လဲ ကောင်းပါတယ်
ချစ်ကြည်အေး February 25, 2012 at 9:52 AM
ကျုပ်တို့ မန်းလေးနန်းကြီးသုတ်နဲ့တော့ စတိုင်မတူဘူးတော်ရေ့....
မန်းလေးစတိုင်က ဆီဝါနဲ့ ငဖယ်အပြားလိုက်ညှပ်ထည့်ပြီး သုတ်တာအေ့။
ကြက်သွန်ကို အကွင်းလိုက်မလှီးဘဲ ပုံမှန် စက်ဝိုင်းခြမ်းပုံပဲ လှီးတာမျိုး။
အောက်ဆုံးပုံကြည့်ပြီး မောင့်ကို သနားသွားတယ်း)) ခွိ....
တီချမ်း February 25, 2012 at 11:54 AM
ဒါကတော့ ရှင်က သက်သက်ကပ်တာပါ ဒေါ်ချစ်ရယ်
ဆီက နနွင်း အသုံးများရင် ဝါတာပေါ့ ကျုပ်က အရောင်တင်ဆီ ပိုသုံးတာ
ငါးဖယ် မကြိုက်လို့ ဝက်သားလုံးထည့်တာ ရှင်းထားတယ်လေ ဟွင့်
ကြက်သွန်ကလဲအလှပါဆို ဘာပဲ ပြောပြော ရန်ကုန်ကမှ မြို့တော် နော် ခွိ အလကားပြောတာ မန်းလေး က မုန့်တွေကို ပိုကြိုက်တယ် ဖက်ထုပ်တို့ မြီးရှည်တို့ ကီးမားတို့ ဦးနှောက်ခေါက်ဆွဲတို့အကင်တို့မာလာဟင်းတို့ရှလွတ်
နာမည်ရင်းနဲ့ သုံးတဲ့ ဂျီမေးကလည်း ၀င်မထားတော့ အလုပ်ရှုပ်လို့ပါ
Baris Bilengil February 26, 2012 at 4:52 AM